आज मंगलबारको दिन सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुद्ध मनले भगवान श्रीगणेश यो विधिले पूजा गर्नुहोस – Dailny NpNews
आज मंगलबारको दिन सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुद्ध मनले भगवान श्रीगणेश यो विधिले पूजा गर्नुहोस
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ११, २०७८ समय: १४:१५:१४
मंगलवारमा कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने ? हिन्दुधर्ममा हप्ताको हरेक वारलाई देवी-देवताको वार मानिने गरिन्छ। विशेष व्रत र उपवास बाहेक अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले हप्ताको कुनै एक वा दुईदिन सोहि वार अनुसारको देवताको पूजा गरि व्रत बस्ने गर्दछन् । हेरौँ, मंगलवारमा कुन देवी-देवताको पूजा गरिन्छ ।
नेपाली पात्रो अनुसार यो दिन हप्ताको तेश्रो दिन हो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू मंगलवारमा गणेश भगवानको पूजा गर्दछन् । ज्योतिषशास्त्र अनुसार मंगलवारलाई भगवान गणेशको वार मानिन्छ । साथै यस दिन काली माता, दुर्गा माता र हनुमानको पनि पुजा गरिन्छ। यस दिन व्रत बस्दा विहानको खाना खानुहुँदैन भने साँझको खानामा नुन मिसाउनु हुँदैन ।
मंगलबारको दिन भगवान श्री गणेश जी लाई पुजाआजा कसरी गर्ने ? (पूजाविधि सहित)
हनुमानको पूजा विधी